चर्चित युवती बिहे नगरी आमा बन्न लागेको खुलासा, कसरी सम्भव भयो ?::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
चर्चित युवती बिहे नगरी आमा बन्न लागेको खुलासा, कसरी सम्भव भयो ?
मुम्बई – बिहे नगरी आमा बन्न लागेको कुरा सुन्दा आश्चर्य लाग्छ सक्छ । तर पछिल्लो समय महिलाहरू विवाहको मामिलामा उदार हुँदै गएका छन् ।
कुनै बेला सन्तान जन्माउन बिहे जरुरी ठान्ने सामाजिक मान्यता बिस्तारै भत्कँदै छ । बेलाबेला बलिउडमा नायिकाहरू बिहे अगाडि नै आमा बन्न लागेको खबर बाहिरिने गर्छ ।
केही समयअघि बलिउड नायिका एमी ज्याकसनले बिहे नगरी आफू आमा बन्न लागेको खुलासा गरेकी थिइन् । मोडल तथा नायिका बु्रना अब्दुल्लाह पनि बिहे नगरी आमा बन्न लागेको खबर बाहिरिएको छ । बु्रना बाज्रिलियन मोडल हुन् ।
उनले ग्रान्ड मस्ती, हेट लभ स्टोरी, क्यास, जय हो, देशी ब्वाइज, मस्तिजादेलगायतका हिन्दी फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी छन् । यसका साथै विभिन्न रियालिटी सो, कमेडी क्लासमा पनि काम गरेकी छन् । बु्रनाले गत जुलाईमा बेलायती पे्रमी एलान फ्रेजरसँग इन्गेजमेन्ट गरेकी हुन् ।
बनाले आफू प्रेमीसँग निकै खुशी रहेको बताउँदै सन्तान जन्माउन बिहेभन्दा पनि आपसी समझदारी चाहिने बताएकी छन् ।
उनी भन्छिन्, ‘विवाह प्रेमीलाई दिइने प्रमाणपत्र मात्रै भएकाले बच्चा जन्माउनुमा बिहे हुनु र नहुनुले असर पार्दैन । हाल उनी पाँच महिनाकी गर्भवती छन् ।’
उडिरहेको विमान अचानक हाल्लियो, ३५ यात्रु घाइते
राजधानीमा गोलि चल्यो, ८ जनाको मृत्यु
दशककै शक्तिशाली भुकम्पले मच्चायो वितन्डा, कस्तो छ अवस्था ?
खतरनाक आक्रमणमा एक नेपालीको ज्यान गयो, कस्तो छ अबस्था ?
गुडिरहेको पेट्रोल गाडी विस्फोट हुदाँ ४५ जनाको मृत्यु
एकाएक संसद भवनभित्रै छिरेर तोडफोड, दर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप